Linus Torvalds yakaputika zvakare pamazita ekutumira tsamba, panguva ino yaive nemushonga wekudzivirira | Kubva kuLinux
Linus Torvalds ndiye musiki weLinux uye pasina kupokana humwe hwehunhu hunonyanya kuzivikanwa munyika yeakavhurika sosi uye zvinofanirwa kutaurwa kuti izvi hazvina kumupa iye mukurumbira waanawo asi zvakare akarembera nedhimoni uye anorema kwazvo munzira, kubvira pazviitiko zvakasiyana anga ave nekukonana kukuru zvese nevanogadzira kernel, pamwe nevemarudzi mazhinji (ndizvo zvazvakaita naNvidia).
Iyi nhevedzano yemakakatanwa vanga vachikosha kwaari nekuti vatove mune imwe nguva yekuzivisa kusiya basa kwenguva pfupi pachinzvimbo chake seLinux kernel budiriro murongi (muna 2018), sezvo kumiswa kwebudiriro yaive chishuwo chekufunga zvekare basa ravo munharaunda uye vane nguva yekudzidza nyaya dzine chekuita nekunzwisisa manzwiro evanhu uye mhinduro yakakodzera mumamiriro ezvinhu ehondo.
Tinofanira kufunga nezvazvo Linus zvakare, munhu uye nekudaro tinogona kukanganisa uye zvakare zvinoshanda kukumbira ruregerero Uye saka zvaive nekuti akakumbira ruregerero nekuve asina kudzikama dzimwe nguva uye kupindura zvine hukasha kune vamwe vanhu zvikanganiso nezvikanganiso
Idzi pfungwa dzakakonzerwa nekukanganisa kwaLinus pachake uye kuitirwa kwenharaunda nekukanganisa uku.
Linus akakanganisa nzvimbo uye nguva yeOctober Linux Kernel Maintainer Summit uye akaronga zororo nemhuri yake panguva iyi. Linus akazvipira kuitisa musangano uyu asipo, asi varongi vakazvipinza munzvimbo yaLinus uye vakavhota kutamisa chiitiko kubva kuVancouver kuenda kuElinburgh kuitira kuti agone kuenda kumusangano uyu asingamise rwendo rwake rwemhuri.
Zvisinei nekuyedza uku kuchinja hunhu hwako mukukonana mamiriro, Linus Torvalds haana kudzora uye akaita mhinduro zvakare nehasha kurwisa "anti-vaccine" vanhu vanoshanda mukuvandudzwa kweLinux kernel.
Uye ndeyekuti Linus Torvalds akaedza kureva dzidziso yekurangana uye akasimbisa nharo dzisina kuenderana kune vamiririri vesainzi pavanenge vachikurukura nezvejekiseni rinopesana neCOVID 19, muchirevo chemusangano uri kuuya weLinux kernel Developers (pakutanga zvakatemwa kuti musangano uchaitwa pamhepo, segore rapfuura, asi mukana wacho waifungidzirwa kuongorora sarudzo iyi yekuwedzera muhuwandu hwevanhu vakabayiwa nhomba).
Linus "zvine mutsindo" akamubvunza kumutauri kuchengetedza pfungwa yake kwaari ("SHUTSA HELL UP"), usanyengere vanhu, uye usabate pseudoscientific nonsense.
Sekureva kwaLinus, kuyedza kuparadzira "nhema dzekunyepa" nezve majekiseni zvinongoratidzira kushaya mukana kwevatori vechikamu kana kuda kutora izwi remashoko asina kutsigirwa kubva kumanyepo avo pachavo vasingazive zvavari kutaura nezvazvo.
Kuti usave usina hwaro, Linus yakaratidza zvakadzama zvakaringana chii chaicho kukanganisa yeavo vanotenda kuti mRNA-based vaccine inogona kuchinja DNA yemunhu.
Iwe hauzive zvauri kutaura nezvazvo, hauzive kuti mRNA chii, uye urikuparadzira nhema dzenhema. Pamwe anozviita nekusaziva, nekuda kwehutsinye. Pamwe urikuzviita nekuti wataura ne "nyanzvi" kana YouTube mavhidhiyo evanyengeri vasingazive zvavari kutaura nezvazvo.
Asi damn, zvisinei nekwaunowana ruzivo rwako rwekunyepa kubva, chero runyorwa rwe Linux kernel yekukurukura harisi kuzorega hupenzi hwako husina maturo kupfuura neni ndisina kupokana.
Majekiseni akaponesa hupenyu hwemakumi emamiriyoni evanhu.
Zvekuvakira kwako chete kana iwe uchinyatsoda kuve nehunhu - mRNA haichinje ayo maitiro akateedzana neimwe nzira. Ndiwo chaiwo mhando yepakati (uye yechinguva) zvinhu izvo maseru ako anogadzira mukati nguva dzese sechikamu chemaitiro avo akajairwa ema cellular uye ese majekiseni mRNA anoita kuwedzera dhizaini yekuteedzana kwavo kwakasarudzika uko kunozoita michina yavo yakajairwa sero kugadzira iyo spike protein saka muviri wako unodzidza kuzviziva.
Tinofanira kuziva kuti maitiro aLinus Torvalds haasi echokwadi, asi zvakare ane poindi yekutsigira, nekuti nekudaro anoremekedza sarudzo yevamwe kuti vade kubayiwa here kana kuti kwete, izvo zvisiri izvo ndezvekuti vamwe vanoedza kupindira muyero wevamwe.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » Noticias » Linus Torvalds yakaputika zvakare pamazita ekutumira tsamba, panguva ino yaive nemushonga wekudzivirira
Daniel Eugenio Garcia akadaro
Pindura kuna Daniel Eugenio García
Ndiri kurwara neiyo anti-vaccine shit, STUDY FUCK !!!! rega kugadzira kusagadzikana
iye anoyamwa makabhini akadaro
Anodiwa torvalds: zvipire iwe kune linux kernel. Usataure usingazive ... asi zvinoreva kuti akatengesa izvo zvishoma zvevanhu zvaakasiya kune zvakasviba zvido.
Pindura kune chupa cabaras
Ndiri kutanga kuguta neavo vanotsoropodza vamwe nekuda kwekufunga zvakasiyana.
Anodiwa mbudzi dzinoyamwa:
Ini ndinokurudzira kuti ini ndipfuure neye pre-yunivhesiti dzidzo zvakare. Kuti urangarire zvinhu zvekutanga senge akasiyana nucleic acids uye nebasa rawo.
MX Mate: Little Linux Kuedza - Kumhanya Mate paMX Linux